Magellan Strait, Estrecho de Magallanes - Chile
Rohy: ny Oseana Atlantika sy ny Oseana Pasifika;
Misaraka: Amerika Atsimo kontinanta sy ny vondronosy Tierra del Fuego;
Ambainy: kely 3,5 km;
Length: 575 km.
Azo antoka fa tsy misy olona toy izany, fara fahakeliny, no tsy nanonofy ny handeha amin'ny dia an-dranomasina amin'ny sambo iray. Ny dian-tongotra lava dia azo tanterahana amin'ny alàlan'ny fiaramanidina ny Magellan, izay iray amin'ireo lava indrindra. Ireo mpizaha tany izay nanapa-kevitra ny hitsidika an'i Shily dia tena tsara vintana, satria ireo banky roa ireo dia mankany amin'ny faritanin'ity firenena ity, any Arzantina dia ny faritry ny ilany atsinanana ihany.
Magellan Strait - famaritana
Ireo izay nanapa-kevitra ny hahalala tsara kokoa ny jeografia ary hianatra ny toetran'io vatana rano io dia misy fanontaniana maro. Anisan'izy ireo ny: aiza ny lalana ety Magellan? Ny toerana misy azy dia ny sisintany eo anelanelan'ny vohikalan'ny Tierra del Fuego sy ny tendron'ny kontinanta Amerikana Atsimo. Ny tena mampiavaka azy dia azo atao ny mijery ranomasina roa, arakaraka ny halavany. Rehefa nanontaniana hoe iza amin'ireo ranomasina no mampifandray ny Lalana Magellan, dia nomena ny valiny fa Atlantika sy Pasifika izy io.
Ny vatan'io rano io dia manana ny toetra manaraka:
Ny halavan'ny lalan'ny Magellan dia 575 km;
20 metatra - amin'ny toerana lehibe indrindra;
Ny halalin'ny faritanin'i Magellan dia 20 metatra. Ambonin'izany, dia lalina kokoa any amin'ny faritra avaratra andrefana noho ny any avaratra atsinanana.
Ny lozam-pifamoivoizana dia manamarika fa ny fiovana eo aminy dia tena sarotra, satria tery loatra any amin'ny toerana sasany, izay manamarika ny volkano sy ny vatohilohin-driaka ary tsy azo itokisana amin'ny resaka tondra-drano.
Ny renirano dia nahita ny sambo malaza avy any Portugal Fernand Magellan. Ny 20 septambra 1519 avy any Espaina no nandeha sambo nitatitra azy, izay tery tery, noho ny oram-baratra. Ity zava-nitranga ity dia nitranga tamin'ny 1 Novambra 1520 tamin'ny Andron'ny Olomasina, rehefa nosokafana ny andrinin'i Magellan. Ny Magellan no lasa mpikaroka, izay nanamboatra ny lalana avy any amin'ny Oseana Atlantika ka hatrany Pasifika, ary noho ny fanomezam-boninahitra azy no nantsoina hoe tery. Hatramin'ny niorenan'ny Lakandranon'i Panama tamin'ny taona 1914, ny làlan'ny Magellan dia heverina ho hany tokana izay mampifandray sy mampiseho lalana azo antoka avy amin'ny ranomasimbe iray mankany amin'ny iray hafa.
Ny sandan'ny fizahan-tany an-dalambe
Rehefa nianatra ny lalan'i Magellan tao amin'ny sari-tany dia maro no maniry ny hamerina ny lalan'ny mpikaroka Portiogey sy hanao dia lavitra. Izy io dia tafiditra ao amin'ny lalana fizahan-tany maro. Azonao atao ny mijery ny tanànan'i Chili amin'ny seranana. Rehefa avy nahita ny sarin'ny Lalan'i Magellan ianao, dia afaka mahita trozona misy trondro, penguins izay miaina any amin'ny zanatany lehibe, liona any an-dranomasina.
Antoko amin'ny fomba ofisialy "USSR"
Ahoana no fomba fitsaboana ny zezika amin'ny fiandohan'ny lohataona?
Sconces ho an'ny efitrano fandriana
Hypoplasia amin'ny aretin-drivotra marina
Makhagon - inona no lokony?
Pyrethrum - mitombo avy amin'ny voa
Fomba 10 hamerenana ny tanora
Fanentanana ny fofona
Hatafy akanjo hoditra
Karazana kiraro tokony hatao avy amin'ny akanjo amin'ny lohalika?
Ny fomba hananana avocados - ny fomba tsara indrindra
Volo volon'ny volo
Virgo Man amin'ny fifandraisana
Ny sakaiza Cristiano Ronaldo dia nanohana ilay mpilalao tamin'ny lalao farany teto Angletera
Afangaro voanio sotro
Wedding Hanambady ho an'ny Ampakarina
Soda amin'ny tarehy
Inona no hiomanana amin'ny zaza hisakafo hariva?
Ny blaogy Kanye West voalohany dia niseho an-tserasera taorian'ny hôpitaly